बैंकहरूले मागे ब्रोकरको काम, के भन्छ धितोपत्र बोर्ड? :: Setopati
बैंकहरूले मागे ब्रोकरको काम, के भन्छ धितोपत्र बोर्ड?
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न सहजीकरण गरिदिन भन्दै नियामक राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
सहायक कम्पनीमार्फत बैंकहरुले ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न चाहिरहेका छन्। अर्कोतर्फ देशमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट छ। अरु कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिइँदैन।
कतिपय देशहरुमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरु गर्दै आएका छन्। सहायक कम्पनीहरुले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मार्फत् ग्रामिण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन्।
तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकबाटै पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने औंल्याएको छ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सिइओ पारसमणि ढकालले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न दिएमा प्राविधिक पक्ष मजबुत हुने बताउँछन्। उनले भने ‘अहिले टिएमएस नखुल्ने लगायतका प्राविधिक समस्या देखिएका छन्, तर हामीलाई लाइसेन्स दिँदा प्राविधिक रुपमा मजबुत सिस्टम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
त्यस्तै सञ्जाल पनि विस्तार भई पुँजी बजारको पहुँच बढ्ने उनले बताए।
हाल काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सीमित केही शहरमा मात्रै ब्रोकर कम्पनी संचालनमा छन्। घोराही, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, भैरहवा, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, बागलुङ बजार, हेटौंडा, इटहरी, बिर्तामोड, वेशीशहर, नारायणघाट, धरान, बिराटनगर, नेपालगञ्ज, झापा, बनेपा र धनगढीमा मात्रै तीनै ५० मध्येबाटै शाखा संचालनमा छन्।
तर बजारको नियामक धिताेपत्र बाेर्ड भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने अन्यौलतामै अड्किएको छ।
कतिपयले बैंक वा तिनका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ हुने दावी गर्छन्। खासगरी अहिलेका ब्रोकर कम्पनीका संचालकहरुले यस्तो हल्ला फैलाउँदै आएका छन्।
लगानीकर्ता पिताम्बर शर्मा खरेलले आफ्नो व्यवसाय गुम्ने डरले ब्रोकर संचालकले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ हुन्छ भनेर हल्ला पिटाएको दावी गर्छन्।
‘इन्साइडर ट्रेडिङ त अहिले पनि भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक व्यवस्था पो गर्ने हो त’ उनले भने।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई कुनै हालतमा लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा ब्रोकर कम्पनीहरु छन्।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट अहिलेका ब्रोकर कम्पनीलाई नै मजबुत र दह्रो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘भएका कम्पनीले नै शाखा खोल्छौं, सेवा विस्तार गर्छौँ, पूर्वाधारको विकास गर्छौं, पुँजी बढाए पनि हामी तयार छौं भनिरहेकै छौँ, तर हामीलाई भनेको ठाउँमा शाखा खोल्न दिइन्न’ उनले भने।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना ब्रोकर कम्पनी थप गर्ने विषयलाई आफूले नै जोड दिँदै आएको दावी गर्छन्। ‘कसरी लाइसेन्स दिने, मापदण्ड के के राख्ने, कति वटालाई दिने, के प्रक्रियाबाट दिने, कति पुँजी तोक्ने भन्ने विषय अहिले छलफलकै क्रममा छौं’ उनले भने।
बोर्ड अहिले बैंक वा तिनका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने पक्षमा पनि नरहेको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८, १७:३५:००